Nhau - ZVAKAWANDA ZVAKASIYANA ZVEGALLIC FARM ZVINOGONESESWA, SEZVINOSIMBISWA NEVARIMI VENzvimbo, IZVOZVO ZVINOGONESEKA PAMUSORO paAGR FARM STOCKS
Iyo AGR Garlic Farm, yakaitwa mukurumbira nekurudziro kubva kune vanofarira vevatengi vemuno, yanga ichirima gariki pasi kwemakore. Bhizinesi rekukohwa rinogadzira akawanda magariki akapinza zvigadzirwa kubva kutsva gariki kusvika kugariki poda.
AGR Garlic Nyanzvi, maneja Wendy Chen, anofara kuti Garlic Farm yabvuma kuisa zvigadzirwa zvavo. Wendy akati, "AGR Garlic Farm zvigadzirwa zvakasarudzika kuchamhembe kweChina. Hakuna mumwe munhu anopa zvigadzirwa zvakasiyana. Tisati tagona kuzivisa kuuya kwechitoro mumusika wemo, isu takatotengesa kunze kwezvose zvatiinazvo. Mhinduro zvigadzirwa zvave nazvo kubva kune vedu vatengi vatengi zvave zvichishamisa. "Ini zvirokwazvo ndinogona kukurudzira garlic itsva."
AGR Garlic Zvigadzirwa zvepurazi zvakachengetwa zvinosanganisira matsva egariki mababu, akasiyana siyana egariki yekupfeka, gariki poda, gariki granules, uye garlic mafuta.
VaCrisp Xu, Director uye mubatsiri weAGR Garlic Farm, vakati, “Vamwe varimi vemuno pavakauya kwatiri kuti vaone kana vachigona kutengesa zvigadzirwa zvavo takafara kubatsira.
“Hatina gariki yakawanda kwazvo yezvigadzirwa zvedu mudura uye tinofara kunzwa kuti vatengi vekunze kwenyika vari kunakidzwa nerudzi rwunowanikwa. "Tiri boka remakiromita emapurazi anotengesa kunze achida kwazvo kuchengetedza mukurumbira wedu, kushanda nemaruwa kunoenderana nemabatiro atinoita bhizimusi."
Kana iwe uchida rumwe ruzivo nezve AGR Garlic Farm uye huwandu hwayo hwezvigadzirwa ndapota shanyira webhusaiti: www.zivi.y6tprimeagr.com. Garlic Farm zvigadzirwa zvinongowanikwa chete mudura zvakagadzirira kutengeswa uye kutumirwa kumikova yako neboka redu rakanakisa rekutengesa panguva ino.
Pamwoyo weAGR Garlic kuzvipira kune mararamiro ehupenyu. AGR Garlic Farm iri yega-irimo uye ichokwadi 'munda kune ndiro' mashandiro anoshandisa iwo epamusoro mwero wekusimudzira. Ichishandisa miitiro yekurima yakaomarara AGR inozvishingisa nekuravira kwepamusoro zvigadzirwa zvitsva kubva kumaAsia echinyakare kumaruwa. Bhizinesi rekurima rekurima rinotambanukira kumapurazi maviri uye rakura kusvika zviuru zvemakiromita. Organic ginger, maapuro, hanyanisi, uye gariki kana mumwaka, zvinorererwa mumapurazi. AGR Farm inochengeta zvigadzirwa zvinoshanduka zvekumaruwa kubva kune vanotengesa vemuno kuenda kunze kwenyika.
Mhando dzakasiyana dzeAGR Garlic Farm zvigadzirwa zvinoratidzwa zvave kuwanikwa pa www.remusic.com.